Aragtiwanaagsan.com – Wararka
Category Archive: Dhacdooyin, Wararka
Markab laga leeyahay dalka Denmark ayaa badbaadiyey Dad tahriibayaal ahaa, oo sabeynaayey badweynta dusheeda!
Jun 23, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Markab laga leeyahay dalkaasi Denmark ayaa samatabixiyey dad tahriibayaal ah,oo tiradoodu dhaneyd 222 ruux,oo ku dhex jiray laba saxiimadood oo yar yar..meel u dhow xeebta liibiya.waxayna geeyeen...
Madaxii Sirdoonka dalka Riwaanda oo london lagu xidhay!!!
Madaxa sirdoonka dalkaasi Riwaanda Mr.Karenzi karake,kaas oo ay doondooneysay dawladda dalkaasi spain…dambiyo dagaal oo loo haysto awgeed,ayaa Unugta booliska ee loo yaqaano(met police) ku...
Weerarkii ay Daalibaan ku qaaday Baarlamaanka Afgaanistaan oo soo afjarmay!
Jun 22, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
sawiradan waxa qaaday mudane ka tirsanaa baarlamaanka oo arkaayey wixii dhacaayey. Weerarkii qorsheysnaa ee Daalibaan ku qaaday baarlamaanka dalka afgaanistaan oo la soo afjaray, iyadoo lagu laayey...
Saxaafada somaliland baynal maadi wal xaadiri wal mustaqbal!!
Jun 22, 2015 cabdicasiis mohamed Wararka 0
waxaan filayaa akhristow inaydun igu aragtee anoo in badan dhaliilaya saxaafada somaliland maanta ka jirta qaybaheeda kala duwan mana aha runtii mid aan ula jeedo qayb gooniya balse waa waxaan ka...
Saanbuusaha oo noqday Afur-dhaqameed aan duugoobeyn oo dadka Soomaalidu ku afuraan Ramadaanta!
Waligeen ba,waynu ku soo barbaarnay iyadoo saanbuuse lagu afuraayo,oo la shiilaayo xilliyada bisha barakeysan ee Ramadaan soo gasho…waxaad arkaysaa xafadaha oo ay ka soo baxayso urta saliidda...
Maalinta Caalamiga ah,ee Cibaado-jimicsiyeedka(Yoga) ee dalka Hindiya oo maanta la xusay!!
Jun 21, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Uncategorized, Wararka 0
Yoga…waa Cibaado jimicsiyeed ka soo jeedda falsafad dalkaasi Hindiya laga bilaabay oo noqotay maanta ciyaar cibaado jimicsiyeed laga xuso dhammaan adduunkoo dhan! hadaba,maanta dalkaasi Hindiya...
18 ka May waa Maalin Dareen Wadaniyeed iyo Qadiyadeed huwan!!
Jun 21, 2015 cabdicasiis mohamed Bogga Horumarka, Dhacdooyin, Wararka 0
18ka Bisha May waa maalin dadka reer somaliland u sameysa dhadhan iyo micno gooniya….ilaa tani iyo markii dadkareer Somaliland la soo noqdeen dawladdoodii ay geeyeen 26 June,1960kii, waxa...
Sidee Qaadka bulshadeenna cunta looga joojin karaa?? Doodda Aragtiwanaagsan.com
Jun 20, 2015 cabdicasiis mohamed Bogga Horumarka, Wararka 0
Aragtiwanaagsan.com:Waxa mareegta Aragtiwanaagsan dooneysaa in ay bal ay akhristayaasha weydiiso fikirkooda ay ka qabaan sida Qaadka loo joojin karo ama looyareyn karo….waxa jirta in bulshada...
Nin diyaarad ku soo laabay oo ka soo dhacay oo dhintay!!!
Jun 20, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Ninkan oo loo maleynaayo in uu ka laalaaday oo uu ku dhagsanaa dhinaca hoose ee diyaarad ayaa dhintay,ka dib markii uu ka soo dhacay,ka yar hor uun markii ay diyaaraddu soo cago dhiganeysay garoonka...
Orodyahanka reer Somaliland ee Mo Farah ayaa sheegay in uuna waligii qaadan maandooriyayaasha!!
Jun 19, 2015 cabdicasiis mohamed Qof Muhiim ah, Wararka 0
Orodyahanka reer Somaliland ee u orda dalkaasi ingiriiska..ayaa waxa uu sheegay in uuna waligii qaadan maandooriyayaasha la isticmaalo xilliyada orodka la soo bandhigaayo,ka dib markii ...